IiTattoos ezincinci zaMadoda-Iingcebiso kumadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Iitatto yile mizobo yokomfuziselo esele ikho iminyaka emininzi, zizinto zobugcisa ezihlala zingaguquki ngonaphakade. Ukuba uyathanda ukuhombisa ulusu lwakho kwaye unike nenqaku loyilo, kodwa ngaphandle kokunika ukongezwa komzobo, iiTattoos ezincinci zamadoda sisiphakamiso esifanelekileyo.
Kukho amawaka eemilo kunye nemibono kubuntu nganye, enemizobo emininzi yobugcisa kunye neemilo zesizwe, Kukuyila kuphela kunye nokukhetha eyona ilungele isimilo somntu ngamnye. Ngaphandle kwamathandabuzo, nayiphi na itattoo iya kuhlala ivusa umdla wabo bayigcinayo, kuba zonke ziyavela kunye nalaa mfihlakalo kunye neminqweno.
1 Iitatto ezincinci zamadoda
1.1 Iitattoos ngamandla kunye nophuculo
1.2 IiTattoos ezandleni
1.3 Iitattoos ezincinci
1.4 Umvambo ngomyalezo obhalwe ngesandla
1.5 Iitattoo zesizwe
Iitatto ezincinci zamadoda
Kukho iifom ezingapheliyo kunye neemodeli, kuphela ekubunjweni komzobo obonisa umzuzu weemvakalelo wangoku kunye yibeke kwelona candelo lomzimba wakho libalaseleyo. I tattoo encinci yeyona ilungileyo eyahlukileyo kwabo baqalayo abaqala kwinqanaba lentlungu kwaye ilula kwaye iyabubulumko. Fumana iimilo kunye neemodeli ezinokumangalisa:
Iitattoos ngamandla kunye nophuculo
ZiyiTattoo abonisa loo mzuzu wokuzivelela komntu. Kwabo bantu basandula ukoyisa umzuzu ombi ebomini babo, fumana umvambo obonisa olo phuculo, iya kunika ukuzola kunye nokwoneliseka ngalo lonke ixesha ukhumbula loo meko. IiTatoo eziqhelekileyo zezona zinomlinganiswa oza kunika amandla ekubonakaliseni kwabo, ezo ziphinde zenziwe kwimizobo kunye neempawu zentsomi kunye nabanye ngobuntu babo; ezinye ziya kuphinda zenziwe okanye zitsalwe ngumntu omnye, njenge semicolon okanye ngegama elilula.
Yayiyimfashini ngaphambili eyayibonakala kuphela phakathi kwabaphuli-mthetho, kodwa namhlanje kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukubabona ngaphakathi koluntu lwethu. Kuya kusanda ngokuthandwa ngabantu abaninzi ukubona olu hlobo lweeTattoos, kodwa eneneni ukwenziwa kule ndawo kukhokelela kukuzibophelela okukhulu.
Uluntu lwethu lusakucalula oku, Kungenxa yoko le nto kukho imisebenzi ethile engavumelekanga ngolu hlobo lweetattoo ezandleni, kuba azizukucinga ngomntu ozinxibileyo njengomsebenzi onokubakho.
Xa usenza isicelo sakho, cinga njalo Baninzi abaculi be tattoo abacalulayo kule ndlela. Yindawo efuna inkqubo yokuphilisa enzima ngakumbi, kunye neendawo ezigwenxa nezingaqhelekanga ukuthintela umsebenzi wabo. Indawo yesandla sezandla okanye yeminwe inokuba yi Inxalenye enzima yokuba i-inki ilungiswe, ayisiyongcebiso intle.
Njengomgaqo oqhelekileyo, ezi ntlobo zeetattoo zibuhlungu ngakumbi. Lo mmandla uqulethe amafutha amaninzi kwaye ulusu lusondele kakhulu kwithambo, kwaye loo nto kwenza umsebenzi wakho ubuthathaka ngakumbi. I tattoo esentendeni yesandla nayo iyachaphazeleka ngakumbi, kuba le ndawo inokudala Ukonakala kwe-inki yokuqala, ukuba ngummandla womsebenzi omninzi kunye nokuxubana.
Zizithambo ezilula ezinophawu olukhethekileyo, nangona bonke benenzululwazi yabo eyinyani. Zingaba yimizobo okanye iikhowudi ezenziwe ngumntu ngokwakhe, okanye iisimboli ezincinci ezinqunywe ngendlela encinci. Ijonge nje ulwazi lomzobo okhethiweyo kwaye uyazi intsingiselo yawo ngaphambi kokwenza. Eyona nto ifunwa kakhulu: iintliziyo, iintsiba, iinyanga, amanani amancinci kunye neeleta, amanqaku omculo ... kunye neesimboli ezibonisa inqanaba elitsha ebomini.
Yimizobo encinci egubungela iindawo ezincinci zomzimba, nangona ngokumangalisayo zitsala umdla omkhulu. Ukuba umbono wakho okanye umzobo ukhona entlokweni yakho, uhlala uhleli Umzobi we tattoo unokugqiba ukunika umzobo umnxeba wokuqala.
Olu hlobo lweetattoos zineentlobo ngeentlobo zeemilo neepateni. Isusela kwizilwanyana ezincinci, iikhathuni okanye imifanekiso ukusuka ebuntwaneni. Ezinye ezisefashini kwaye zikhethe kuzo, zezinto zemihla ngemihla, apho ulonwabo olukhulu kunye neemilo zoqobo ziphinde zenziwa.
Iitattoo zehipster Olunye uhlobo lwemizobo enefashoni kakhulu. Zincinci kwaye zenziwe kunye neqabane lakho, zidityanisiwe kwaye yiyo loo nto ziwela kudidi lwabancinci. Zihlala zinentsingiselo enzulu kakhulu, ke kuya kulunga ukuhlala ujonga enye egubungela nakuphi na ukubakho kwexesha elizayo.
Umvambo ngomyalezo obhalwe ngesandla
Ezi ntlobo zeetattoo zintsusa kakhulu. Umyalezo ngowobuqu kwaye ungabhalwa ngokubhalwa ngesandla kwasekuqaleni, ngokungathi wawubhalwe ngesandla. Imiyalezo inokuba namagama osapho, imihla okanye iileta zeArabhu ezinesimboli ethile. Olu hlobo lwe tattoo lubaluleke kakhulu kubantu abadumileyo, ngokuqinisekileyo olunentsingiselo ekhethekileyo.
Olu hlobo lokuzoba Ufuzisela ubugcisa bokwenza umvambo kumakhulu eminyaka. Ngaphambili yayisetyenziselwa ukumakisha umntu kwaye imohlule kumalungu ezinye izizwe. Okwangoku sebenzisa le patheni kwimo yesizwe kwaye nokuba unemizobo edibeneyo, echaza iintlobo ezahlukeneyo zemifanekiso. Uninzi lwazo lukhethekile kwaye lubonakalisa ukulingana, uxolo kunye nemvisiswano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iitattoo ezincinci zamadoda
Uyikhetha njani ifowuni ephathekayo